Ukuba unqatshelwe kwiKholeji, nantsi i-Letter yesibheno seSampula
Ukuba unqatshelwe kwiikholejini, kaninzi ukhetha ukhenketho . Incwadi engezantsi ibonisa indlela enokwenzeka yokubhenela ikholeji. Ngaphambi kokuba ukhangele, ke, qiniseka ukuba unesizathu esisemthethweni sokubhenywa . Kwimeko ezininzi, isibheno asivumelekanga. Ukuba awunalo ulwazi olutsha oluthile lokuya kwikolishi, ungabhali isikhalazo.
Kwakhona, qiniseka ukuba ikholeji yamkela izibheno ngaphambi kokubhala enye.
Ileta yokuBhenela iSampula
Nks. Jane Gatekeeper
IYoung Tower College
Nangona andingamangalanga xa ndifumene ileta yokulahla evela e-Ivy Tower College, ndandidanekile kakhulu. Ndayazi xa ndifaka isicelo sokuba izikolo zam ISAT ukususela ngoNovemba vavanyo ziphantsi kwe-Ivy Tower. Ndayazi kwakhona ngexesha lokuhlolwa kwe-SAT (ngenxa yokugula) ukuba amanqaku ami awazange amele amandla am okwenene.
Nangona kunjalo, ekubeni ndifake isicelo kwi-Ivy Tower ngoJanuwari, ndibuyisele i-SAT kwaye ndathucula amanqaku am. Amanqaku am mathati ahamba ukusuka ku-570 ukuya ku-660, kwaye amanqaku wam okufunda aphakama amaphupha agcwele 120. Ndiyalele iBhodi yeKholeji ukuthumela ezi ziphumo ezintsha kuwe.
Ndiyazi ukuba i-Ivy Tower idikibala izibheno, kodwa ndiyathemba ukuba uya kwamkela amanqaku amatsha uze uphinde ucinge ngesicelo sam. Ndinekota engcono kunoko kwisikolo sam esiphakamileyo (i-4.0 engaphelelanga), kwaye ndifake ingxelo yam bakala yamva kwinqanaba lakho.
Kwakhona, ndiyayiqonda ngokupheleleyo kwaye ndiyayihlonipha isigqibo sakho sokungavumi ukungena, kodwa ndiyathemba ukuba uya kuvula kwakhona ifayili yam ukuqwalasela le ngcaciso entsha. Ndandichukumiseka gqitha yi-Ivy Tower xa ndandwendwela ukuwa kwexesha lokugqibela, kwaye ihlala isesikolweni endifuna ukuya kuyo.
Ingxoxo yeNcwadi yokuBhenela
Njengoko kuchazwe ngasentla, ngaphambi kokuba ubhale ileta yesibheno, kufuneka uqinisekise ukuba unesizathu esisemthethweni sokubhena. Kufuneka uqinisekise ukuba ikholeji ivumela izibheno-izikolo ezininzi azikwazi. Kukho isizathu esihle salo-phantse bonke abafundi abachasiweyo banomuva wokuthi baphathwe kakubi okanye ukuba abasebenzi abamkelweyo bayehluleka ukufunda izicelo zabo ngokucophelela.
Iikholeji ezininzi azifuni ukuhlangabezana nokukhukula kwezibheno abaya kufumana ukuba bavumele ukuba abafakizicelo baxubushe amacala abo. Kwimeko yeJoe, wafunda ukuba i-Ivy Tower College (ngokucacileyo ayilona igama lenene) lwamkela izibheno, nangona isikolo sidimaza izibheno.
UJoe wayethetha incwadi yakhe kuMlawuli wee-Admissions kwiikholeji. Ukuba unxibelelwano kwi-ofisi yokungena-nokuba nguMlawuli okanye ummeli wengingqi yakho-kukulungele ukubhala kumntu othile. Ukuba awunalo igama lomntu, ungayilungisa ileta yakho ngokuthi "Ngubani Ongayikhathalela" okanye "Abathandekayo Abamkelwayo." Igama langempela, okwenene, liva ngcono.
Ngoku ku-body of letter kaJoe. Qaphela ukuba uJoe akagcini. Amagosa angenayo avunyelwa ukucoca, kwaye akuyi kukufumana naphi na. UJoe akatsho ukuthi ukugatywa kwakhe kwakungenabulungisa, kwaye akaqinisekisi ukuba i-ofisi yokungeniswa yenze iphutha. Unokucinga ngezi zinto, kodwa akabandakanyi nabo kwileta yakhe. Kunoko, kokubili kokuvulwa nokuvalwa kweleta, uphawula ukuba uyabahlonela isigqibo sabantu abamkelweyo.
Kubaluleke kakhulu kwisibheno, uJoe unesizathu sokubhena. Wavavanya kakubi kwi-SAT , kwaye wabuyisela umvavanyo kwaye wakhupha amanqaku akhe ngokumangalisayo.
Phawula ukuba uJoe ukhankanya ngokugula xa eqala ukuthatha i-SAT, kodwa akayisebenzisi loo nto. Igosa lokungeniswa liza kuguqula isigqibo nje ngokuba umfundi uthi ezinye zeengxaki zokuvavanya. Ufuna amanqaku okwenene ukuze ubonise amandla akho, kwaye uJoe uhamba kunye namanqaku amatsha.
Kwakhona, uJoe ubulumko ukuba athumele ingxelo yakhe yonyaka. Uqhuba kakuhle kakhulu esikolweni, kwaye amagosa avumelekileyo aya kuthandana nokubona loo mabakala anamandla. UJoe akayeki umnyaka ophezulu, kwaye amabakala akhe ahamba phambili, angabi phantsi. Ngokuqinisekileyo akayikutyhila iimpawu ze- senioritis , kwaye uye wagwema imiba kule ncwadi ebuthathaka.
Qaphela ukuba ileta kaJoe imfutshane kwaye ifikelele kwinqanaba. Akayikuchitha ixesha lee-admissions ezivunyelweneyo neleta ende yokungcebeleka.
Ikholeji isele isicelo sikaJoe, ngoko akayidingi ukuphinda loo nkcazelo kwisibheno.
Ileta kaJoe yenza izinto ezintathu ezibalulekileyo ngendlela echanekileyo. Ubeka intlonelo yakhe kwisigqibo sokwamkelwa; unikeza ulwazi olutsha oluyisiseko sesibheno sakhe, kwaye uqinisekisa kwakhona ukuba unomdla kwiikholeji. Ukuba ubhale nayiphi na enye into, wayeza kuchitha ixesha lezikhulu zamagosa ezamkelwayo.
Igama lokugqibela malunga nokuBhenela kweJoe
Kubalulekile ukuba uqikelele ngesibheno. UJoe ubhala incwadi enobumba kwaye unemivuzo engcono yokunika ingxelo. Nangona kunjalo, unokuthi angaphumeleli kwisibheno sakhe. Isibheno ngokuqinisekileyo sifanele sizame, kodwa uninzi lwezibheno zokugatya aziphumelelanga.
Iimviwo zeeNcwadi zoThando oluqhubekayo
Ukukhubaza uMyalezo weBrown Message War
Ukubaluleka koTyikityo loTitshala
I-Roe v. Isigqibo seNkundla ePhakamileyo seWade: Ingqwalasela
Ukubikezelwa kwee-Olympic Medalist: iGymnastics 2016
Amanqanaba asixhenxe ekuboneleleni ngoncedo kootitshala
Iinkcazo ze "Shadow People" I-Phenomenon
Ukwenza Ukuphila kwiGenaalogy
Iingelosi ze-Guardian ziyakunikhokela njani kwiLucid Dreams
IsiGama esithi "Ndinephupha" Intetho kaMartin Luther King, uJr.
"Ukuba kwaye kuphela Ukuba" Ukusetyenziswa
Yentlekele Yentlekele Engqongileyo E-United States?
I-Appalachian State University i-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data